Puntland: Xukuumadda cusub oo dhegta lagu hayo in la magcaabo – Kalfadhi
Madaxweynaha Puntland mudane Siciid Cabdullahi Deni ayaa la filayaa inuu ku dhawaaqo golahiisa xukuumadda. Wakhtigii dastuurku u ogolaa in madaxweynuhu xukuumad ku soo dhiso oo 21 cisho ahaa iyo 14 maalmood oo dheeri ah oo madaxweynuhu ka codsaday baarlamanka in ay ugu daraan isla markaasna ay u ogolaadeen ayaa ku eg Isniinta 11 febraayo 2019.
Wararka maanta ay Kalfadhi helayso ayaa sheegaya in madaxweynuhu uu golihiisa xukuumadda magcaabi doono cawaysinka sabtida, hadiise ay culaysyadu sii bataan waxaa aad loogu kalsoon yahay gelinka dambe ee Axadda.
Awood qaybsiga beelaha oo is riix riix ka jiro, garabyada siyaasadda ee madaxweynaha ku dhow iyo kuwa ka baxsan iyo qorshaha madaxweynaha ee sida uu hore u sheegay ah in la helo xukuumad hufan oo tayo leh ayaa qayb ka ah culaysyada is diidan ee jira.
Docda kale waxaa meesha ku jirta in hoggaanka cusub uu doonayo in xukuumadiisu ay ka yaraato tiro ahaan tii hore. Madaxweyne Gaas ayaa hoggaaminayay xukuumad ka kooban 20 wasiir iyo ku dhowaad 30 wasiir xigeeno iyo wasiir dowlayaal ah.
Golaha xukuumadda Puntland ayaa sida hay’adaha kale ee dowladda ku dhisan hannaanka awood qaybsiga beelaha.
Mudane Deni waa madaxweynihii ugu horeeyay ee u baahda mudo ka badan wakhtiga dastuuriga ah ee ku cad qodobka 80naad ee Dastuurka Puntland farqadiisa Afraad, taas oo sheegaysa in madaxweynaha oo la tashanaya ku xigeenkiisa uu soo dhisi karo xukuumadda 21 beri gudahood.
Khudbadii uu ku codsaday wakhtiga dheeriga ah wuxuu madaxweynuhu ku sheegay in culayso siyaasadeed iyo kuwa amni ay la soo derseen kuwaas oo u suuragelin waayay inuu xukuumada ku soo dhiso wakhtigii uu dastuurku farayay.
Waxay ahayd 8dii Janaayo markii ay Puntland ka dhacday doorashada madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa.
Xildhibaan Odawaa oo ammaan ku dhoobay caawin uu Gobolka Banaadir u sameeyey caruur darbi-jiif ah